हरेक जलजीवालय मालिक आफ्नो उपकरण निरंतर र कुशलतापूर्वक काम भन्ने तथ्यलाई रुचि छ, र माछा एक लामो समय को लागि बस्ने गरेका छन्। यी लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका राम्रो पानी निस्पंदन खेल्छन्। सबै भन्दा राम्रो के छ मछलीघर लागि फिल्टर र के छनौट गर्दा विचार गर्न नियम? बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्।
प्रकार र आवेदन
फिल्टर प्रयोग खातामा जो यो बिरुवाहरु जलजीवालय बसोबास गर्ने एक, र तिनीहरूलाई कसरी धेरै लिइरहेको गर्नुपर्छ। मछलीघर ठूलो छ भने, त्यहाँ बोट र जीवित प्राणीहरू धेरै, फिल्टर शक्तिशाली, हुन प्रभावकारी हुनुपर्छ पानी सबै प्रदूषक हटाउन छन्। मिति, त्यहाँ जलजीवालय मा पानी फिल्टर को धेरै प्रकार छन्:
जलजीवालय लागि सबै भन्दा राम्रो फिल्टर के हो? प्रत्येक निस्पंदन सिस्टम को मुख्य विशेषताहरु विचार गर्नुहोस्।
यी फिल्टर सबै भन्दा सरल, तर फरक आकार को लजीवालय को मर्मतका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी छन्। तिनीहरू बाहिरबाट एक पंप (को मोटर्स) र एक अवशोषण स्पन्जले मिलेर, एक सरल ग्लास जस्तो। पंप यो स्पन्जले, जसबाट खाली मार्फत बित्दै, ट्यांक मा पानी circulates। uneaten फिड, मृत जीव को मलको माछा remnants - यस्तो फिल्टरिङ भद्दा माटो को हटाउनका लागि प्रभावकारी हुन्छ। तपाईं जलजीवालय को सानो आकार को लागि एक राम्रो फिल्टर खोजिरहेको भने, यांत्रिक मोडेल प्राथमिकता दिनुहोस्।
रासायनिक फिल्टर पानी शुद्धीकरण Adsorbents मार्फत सञ्चालन गरिएको छ कारण, सबै भन्दा अक्सर कोइला रूपमा प्रयोग जलजीवालय मा। यस्तो zeolite रूपमा आयन विनिमय रेजिन, को Advantageously प्रयोग। यस्तो फिल्टर जो राम्रो तरिकाले माटो कण अवशोषित को अवशोषण सामाग्री को porosity थप कुशल र व्यावहारिक धन्यवाद छन्। आयन विनिमय रेजिन राम्रो अमोनिया, nitrates र nitrites, मछलीघर मा बिस्तारै संचित छन् जो को रूप मा हानिकारक toxins सामना गर्दै हुनुहुन्छ।
सबै भन्दा राम्रो र विश्वसनीय निस्पंदन मछलीघर लागि - जैविक फिल्टर को आधारमा। यस्तो पानी उपचार विधि उपयोगी जीवाणुहरु को खेती को लागि आवश्यक छ, जो विशेष फिल्टर कक्ष, मा उपस्थिति पनि समावेश छ। आफ्नो प्रजनन को लागि प्रयोग विशेष सब्सट्रेट। तिनीहरूले उपयोगी पदार्थ संग पानी saturate र हानिकारक पदार्थ विघटित किनभने जीवाणु एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह: अमोनिया, nitrites र nitrates - एक महामण्डल अवस्थामा। रोग र माछा को मृत्यु प्रमुख, मछलीघर बासिन्दाहरू लागि सबैभन्दा गम्भीर र खतरनाक शत्रु - यो तिनीहरूले छ। तपाईं जो जलजीवालय फिल्टर चयन गर्न को लागि राम्रो छ निश्चित हुनुहुन्न भने, यो जैविक विविधताहरु मूल्याङ्कन।
यी फिल्टर तिनीहरूले थुप्रै तरिकामा पानी शुद्ध गर्न सक्ने मा सुविधाजनक छन्। र पनि सरल यांत्रिक मोडेल संयोजन रूपमा, उदाहरणका लागि, अवशोषण स्पन्जले जलजीवालय कोइला संयोजन प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले निम्नानुसार के निष्कर्षमा कोर्न सकिदैन। सस्तो, तर सरल र प्रयोग गर्न सजिलो: सबैभन्दा लाभदायक विकल्प - एउटा सानो जलजीवालय यांत्रिक उपकरणको लागि।
मछलीघर ठूलो छ भने, त्यसपछि तपाईं सर्वश्रेष्ठ फिल्टर 100 लिटर वा जलजीवालय लागि थप के निर्णय गर्ने एक विशेषज्ञ परामर्श आवश्यक छ। अक्सर, यो सफाई को एक उच्च लागत र जटिलता छ जो एक biofilter, प्रयोग गर्न प्रभावकारी र टिकाउ हुनेछ सिफारिस गरिएको छ। खैर, फिल्टर शक्ति र ब्यान्डविथ विचार गर्नुहोस्। यो यसको काम को दक्षता निर्भर गर्दछ। जलजीवालय फिल्टर को स्थान आधारमा आन्तरिक वा बाह्य संलग्नहरू विभाजित छन्। थप विवरण प्रत्येक प्रजाति को सुविधाहरू विचार गर्नुहोस्।
यी प्रजातिहरू मछलीघर भित्र सिधै माउन्ट छन् र फिल्टरिङ तंत्र को एक किसिम हुन सक्छ। यी फिल्टर कारण किफायती मूल्य आफ्नो, प्रयोग र सफाई सजिलो गर्न सबैभन्दा लोकप्रिय छन्। अर्कोतर्फ, प्रयोगकर्ताहरूले तिनीहरूले जलजीवालय एक उपयोगी क्षेत्र "खान" भनेर रिपोर्ट, तर ठूलो एकाइहरु लागि यो यति महत्त्वपूर्ण छैन। के मछलीघर आन्तरिक फिल्टर राम्रो छ? सबैभन्दा लोकप्रिय मोडेल विचार गर्नुहोस्:
एक्वा Szut सुपर मिनी। 10-80 एल मा लजीवालय लागि यो आन्तरिक फिल्टर गुणस्तर शुद्धीकरण र aerated पानी अलग छ। यो फिल्टर प्रयोगकर्ताहरूको लाभ बीच सजिलो मर्मतका, सघन, कम हल्ला स्तर, संभावना पानी शुद्धीकरण को यांत्रिक र जैविक विधि को संयोजन मा, ठाडो वा तेर्सो अवस्थित चिनो। परिष्कृत वातन भाग डिजाइन अक्सिजन संग पानी को संतृप्ति योगदान पुग्छ।
Aquael टर्बो व्यावसायिक फिल्टर। यो आन्तरिक फिल्टर पम्प, मछलीघर मा पानी purifies र यसको वातन कार्य गर्दछ। गुणस्तर oxygenated पानी पनि ठूलो गहिराइमा मा - समान मोडेल विपरीत।
ASAP 500. एक न्यूनतम मर्मतका समय कम जो उच्च उत्पादकत्व र कार्यक्षमता, साथै मूल डिजाइन, संग ब्रान्ड जलजीवालय फिल्टर। त्यसैले तपाईं जो एक जलजीवालय लागि आन्तरिक फिल्टर चयन गर्न राम्रो छ निश्चित हुनुहुन्न भने, र साँच्चै आधुनिक र लाभदायक विकल्प खोजिरहेको, ASAP 500 तपाईंको ध्यान को योग्य छ। यसको डिजाइन - उच्च गुणस्तरीय फिल्टर स्पन्जले संग ऊर्जा-कुशल मोटर संयोजन। आवास सफा वा एउटा नयाँ यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सजिलो छ, साथै, फिल्टर खोक्रो पानी प्रयोगको लागि आदर्श छ।
ALEAS IPF-6200L। थप कुशल र सही, तर महंगा फिल्टर मोडेल। शुद्धीकरण को स्तर वृद्धि मोडेल तुरुन्तै तीन कार्यहरु कार्य wherein दुई कारतूस, प्रदान गरिएको छ - पानी फिल्टर, यो एक परिसंचरण र वातन प्रदान गर्दछ। जैविक निस्पंदन बहु प्रणाली, रूपमा फिल्टर सामाग्री मात्रा। यो उपचार धन्यवाद धेरै लामो लागि सफा रहन्छ जो ट्यांक, एक ठूलो आन्तरिक सतह उत्पादन।
यी मोडेल सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा उत्पादक को एक मानिन्छ र चयन गर्न राम्रो छ जलजीवालय के फिल्टर बारेमा जानकारी खोज्नेहरूलाई गर्न चासो हुनेछ।
बाह्य फिल्टरिङ प्रक्रियाको जलजीवालय बाहिर माउन्ट छन्, तर केवल ट्यूब यसलाई तल। यो प्रजाति प्रतिक्रियाहरू एक किसिम बारेमा। केही फिल्टर मिडिया को ठूलो मात्रा अधिकतम पानी उपचार सुनिश्चित कारण अरूले जलजीवालय अर्को पनि महंगा छ जो फिल्टर, को लागि ठाउँ धेरै आवश्यक ध्यान दिनुहोस् भन्छन्। के हो जलजीवालय लागि बाह्य फिल्टर चयन गर्न राम्रो छ?
सबै भन्दा राम्रो मोडेल
हामी लोकप्रिय मोडेल को एक सिंहावलोकन प्रस्ताव:
Tetratec EX 400. लजीवालय अप 10-80 लिटर, स्थापना र मर्मतका विभिन्न सान्त्वना लागि यो शक्तिशाली फिल्टर। एकीकृत प्रणाली स्वचालित रूपमा स्थापना र फिल्टर सफाई गर्दा पानी ड्र छैन चलाउनुहोस्। जब शक्ति संयन्त्र चुपचाप संचालित। उच्च गुणस्तरीय र प्रभावकारी पानी शुद्धीकरण प्रदान गर्दछ पाँच फिल्टरिङ संयन्त्र पूरा गर्नुहोस्। यी लजीवालय लागि विश्वव्यापी फिल्टर हो। जो 50l राम्रो छ? निर्माता हामी सबै भन्दा राम्रो विकल्प फेला पार्न सक्नुहुन्छ जो बीच मोडेल को दायरा प्रदान गर्दछ।
Eheim। ब्रान्ड उत्पादन मूलतः डिब्बा फिल्टर एक लामो समय को लागि मजबूती र stably सञ्चालन जो प्रस्तुत। विशेष डिजाइन लिक सुरक्षित छ, उच्च गुणस्तरीय प्रयोग , फिल्टरिङ सामाग्री कारण जो पानी चाँडै र स्थायी रूपमा purified छ। लोकप्रिय मोडेल को एक - Eheim क्लासिक 2213, कन्फिगरेसनमा कुन स्पंज र पैड, ट्यूब र डबल नल छन्। ठूलो लजीवालय Eheim व्यावसायिक32073rd मात्रा 180-350 लिटर गर्न मोडेल लागि पर्याप्त लागि उपयोगी। लाभ - सबै fillers को सेवा जीवन बढ्छ जो एक पूर्व-फिल्टर, को उपस्थिति।
Tetra। यो ब्रान्ड जलजीवालय लागि गुणवत्ता र विश्वसनीय बाह्य फिल्टर किन्न प्रदान गर्दछ। जो राम्रो छ? निर्माता मछलीघर मा पानी को अधिकतम रकम प्रदान गर्नेछ मोडेल को एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्ताव।
माउन्ट फिल्टर - माथि वर्णन मोडेलहरू बीच एक समझौता छ। Structurally, मोडेल आफूलाई बाहिर र काम भित्र अवस्थित छन् जो एक पंप छ। तिनीहरूले संकुचित हुन्छन्, तर यो बाबजुद छैन aquarists बीच धेरै लोकप्रिय छन्।
फिल्टर अर्को लोकप्रिय किसिम - तल। पानी तिनीहरूलाई मार्फत बित्दै कि - प्वालहरू भएको एक प्लास्टिक प्लेट को रूप मा एक सरल डिजाइन falshdno छ तथाकथित। आफै मछलीघर को तल देखि2सेमी को एक उचाइ मा स्थित छ फिल्टर, यो भूमि प्लेट राखिएको छ। पानी माटो मार्फत बित्दै, जीवाणुहरु therein तरल को जैविक निस्पंदन योगदान त विषाक्त अमोनिया हटाइएको छ। त्यसैले पंप प्रजातिहरू प्रशस्त। जलजीवालय लागि सबै भन्दा राम्रो फिल्टर जो छ? विशेषताहरु कन्टेनर र यसका सामग्रीहरू आधारमा।
स्क्रू, वितरण, शक्ति: जडान तार टर्मिनल
को बर्नर इन्धन तेल: डिजाइन सुविधाहरू, संचालन र नियन्त्रण
Oysters कसरी खान। केही सुझावहरू
एमटीएसको सन्तुलन जाँच गर्दै। तरिकाहरू
सामा विरुद्ध नुन र सिरका: को नुस्खा समीक्षा अनुपात
समुद्र बीच Resort र एक्वा पार्क4* (मिश्र / Sharm एल शेख) - फोटो र समीक्षा
मास्को मा Arbat मा रेस्टुरेन्ट, ठेगाना, मेनु, समीक्षा